आइपीएल टी–२० क्रिकेट सुरुः कसको संभावना बढी ? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ खेलकुद ∕ आइपीएल टी–२० क्रिकेट सुरुः कसको संभावना बढी ?
Sindhu Khabar आईतबार, २०७८ असोज ३ / ०९:०४
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा बीचमै स्थगित भएको आइपीएल २०२१ को बाँकी खेल युएईमा आजबाट सुरु हुंदैछ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–२० क्रिकेटको १४ औं संस्करण अन्तर्गत् आज दुई पूर्व विजेता चेन्नाई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
खेल खेल दुबईस्थित दुबई इन्टरनेशन क्रिकेट स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार साँझ ७ः४५ बजे सुरु हुनेछ । यसअघि पहिलो लेगको खेलमा मुम्बईले चेन्नाईलाई ४ विकेटले हराएको थियो । चेन्नई ७ खेलबाट १० अंक जोडेर लिगको दोस्रो स्थानमा छ । मुम्बई ७ खेलमा ८ अंकसहित चौथो स्थानमा छ ।
दिल्ली क्यापिटल्स ८ खेलबाट १२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । भारतमा २९ वटा खेल भएपछि गत मेमा केही खेलाडीलाई कोभिड–१९ संक्रमण भएपछि बीचमै प्रतियोगीता स्थगित गरिएको थियो । आइपीएलको फाइनल खेल अक्टोबर १५ मा हुनेछ ।